Muqdisho: Miino Dishay Qofkii Aasayey
Saraakiisha Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada Muqdisho uu ku geriyooday ruux ku aasayey walxaha qarxa inta u dhaxeysa Tarabuunka iyo wadada KM4 degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Wadada uu qaraxu ka dhacay oo ah halbowle u ah isu socdoka magaalada ayaa waxaa isticmaala gaadiidka dadweynah iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom isla-markaana waxaa ku yaalla xarumo waxbarasho.
Ciidan ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo gaaray goobta ayaa gacanta ku dhigay gaari yar oo yaallay agagaarka halka uu qaraxa ka dhacay, oo loo maleynayo inuu watay qofkii ay miinada ku qaraxday.
Sidoo kale booliska ayaa gacanta ku dhigay dhowr qof oo lala xiriirinayo iney caawinayeen qofka miinada aasayey sida uu xaqiijiyay Taliyaha Laanta Danbi barista CID ahna Afhayeenka Ciidmada Booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdullahi Xasan Bariise.
Axaddii la soo dhaafay ayay aheyd markii al-Shabaab ay weerarro isugu jira qaraxyo iyo toogasho ka fulisay Dhismaha Maxkamadaha Soomaaliya, weerarradaas oo dhaliyay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac.